Hiran State - News: Maxaad kala socotaa dhaqaalaha uu shaqsi reer Hiiraan ah ku bixiyey inuu noqdo oo kaliya wasiir?
Maxaad kala socotaa dhaqaalaha uu shaqsi reer Hiiraan ah ku bixiyey inuu noqdo oo kaliya wasiir?
Somalia:- Inkasta oo ay maalmahani ka socotay ruwaayad xaruntii hore ee Vilaa Somaliya haatana ah Villa Ugnadha hadane waa lama huraan in dhacdooyinka qaarkood lala socodo. hadaba siyaasada Somaliya waa mid qatarteeda leh marka dhinackasta laga eego maanta, ha yeeshee sidaasi ay tahay dadbaa dhaqaalo ku bixiya sidii ay mar uun u noqon lahaayeen wasiir.
Hadaba mid ka mid ah muwaadiniinta Somaliyeed kana soo jeeda Hiiraan ayaa waxuu dhaqaalo xad dhaaf ah ku bixiyey inuu mar uun ka mid noqdo xukumada loo dhisay wadanka gumeysiga ku jira. dabcan lacagtaasi waxaa lagu qabankaray waxyaabo badan sida in loogu deeqo dadka dhibaateysan amaba si kale hadaanu u dhigno waxaa lagu xoreyn karay Hiiraan.
Hadaba bal la soco wararkena ilaa caawa magaca muwaadinkaas reer Hiiraan, xildhibaanada reer Hiiraan ee arintaasi fuliyey. markii magaciisa la geeynayey xarunta Villa Ugandha waxa loo sheegay dadkii ay arintaasi quseysay.
Xogtii oo dhameystiran.
· admin on July 20 2011 17:55:16 · 0 Comments · 2351 Reads ·
14,579,806 unique visits